Ezekieri 32 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
32 Uyezve mugore rechigumi nemaviri, mumwedzi wechigumi nemiviri, pazuva rokutanga romwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana womunhu, imba rwiyo rwemariro pamusoro paFarao mambo weIjipiti, uti kwaari, ‘Waitwa kuti unyarare somwana weshumba ava nezenze wemamwe marudzi.+ “‘Wanga wakaita sezimhuka romugungwa riri mumakungwa,+ wakaramba uchibuda nesimba munzizi dzako, ukaramba uchiita kuti mvura ive matope netsoka dzako uye uchisvibisa nzizi dzawo.’ 3 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ndichatambanudzawo mambure+ angu pamusoro pako ndichishandisa ungano yevanhu vazhinji, uye ivo vachakuunza uri mumambure angu okukukudzisa.+ 4 Ndichakuisa panyika. Ndichakukanda musango.+ Ndichaita kuti zvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga zvimhare pauri, uye ndichaita kuti mhuka dzomusango dzenyika yose dzikugute.+ 5 Ndichaisa nyama yako pamusoro pemakomo, ndozadza mipata nemarara ako.+ 6 Ndichaita kuti nyika inwe zvinobuda kwauri, iro ropa rako,+ pamusoro pemakomo; uye hova dzichazadzwa nezvinobva kwauri.’ 7 “‘Paunodzimwa ndichafukidza matenga, ndodzima nyeredzi dzawo. Ndichafukidza zuva nemakore, uye mwedzi hauzovheneki nechiedza chawo.+ 8 Zvinovheneka zvose zvechiedza zviri mumatenga—ndichazvidzima nokuda kwako, ndichaisa rima panyika yako,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 9 “‘Ndichagumbura mwoyo yemarudzi mazhinji pandichaendesa nhapwa dzinobva kwauri pakati pemarudzi enyika dzausina kumboziva.+ 10 Ndichaita kuti marudzi mazhinji atye nokuda kwako,+ uye madzimambo awo achadedera achitya kwazvo nokuda kwako pandichavheyesera bakatwa rangu pamberi pawo,+ uye iwo achadedera nguva dzose, mumwe nomumwe nokuda kwomweya wake, pazuva rokuparara kwako.’+ 11 “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Bakatwa ramambo weBhabhironi richauya pamusoro pako.+ 12 Ndichaita kuti boka revanhu vako riurayiwe nemapakatwa evane simba, ivo vadzvinyiriri vemarudzi, vose zvavo;+ uye ivo vachapamba kuzvikudza kweIjipiti, uye boka rose revanhu vayo richatsakatiswa.+ 13 Ndichaparadza zvipfuwo zvayo zvose zvibve pedyo nemvura zhinji,+ tsoka yomunhu wepanyika haizoizadzizve nematope,+ uye mahwanda ezvipfuwo haazoizadzizve nematope.’ 14 “‘Panguva iyoyo ndichaita kuti mvura yavo ichene, uye ndichaita kuti nzizi dzavo dziyerere sezvinoita mafuta,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 15 “‘Pandichaita kuti nyika yeIjipiti ive dongo uye zvinhu zvizere munyika yacho zvaparadzwa,+ pandichaparadza vagari vose vari mairi, ivo vachazivawo kuti ndini Jehovha.+ 16 “‘Urwu ndirwo rwiyo rwemariro, uye vanhu vacharuimba. Kunyange vanasikana vemarudzi vacharuimba; vacharuimbira Ijipiti neboka rose revanhu vayo,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.” 17 Uyezve mugore rechigumi nemaviri, pazuva rechigumi nemashanu romwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 18 “Mwanakomana womunhu, rira nokuda kweboka revanhu veIjipiti uriburutsire pasi,+ iyo nevanasikana vemarudzi ane simba, kunyika iri pasi pasi,+ pamwe chete nevaya vari kuburukira mugomba.+ 19 “‘Ndianiko waunopfuura pakunaka?+ Buruka, ucharariswa pamwe chete nevasina kudzingiswa!’+ 20 “‘Vachawira pakati pevaya vakaurayiwa nebakatwa.+ Iyo yaiswa kubakatwa. Izvuzvurudzirei kure pamwe chete nemapoka ayo ose evanhu. 21 “‘Varume vakuru vevane simba vachataura naye, pamwe chete nevabatsiri vake vari pakati peSheori.+ Vachaburuka;+ vacharara pasi sezvinoita vasina kudzingiswa, vakaurayiwa nebakatwa. 22 Ikoko ndiko kune Asiriya neungano yayo yose.+ Makuva ake akamupoteredza. Vose zvavo vakaurayiwa, vaya vanourayiwa nebakatwa.+ 23 Nokuti makuva ake akaiswa mumativi omukatikati megomba,+ uye ungano yake yakapoteredza guva rake, vose zvavo vakaurayiwa, vachiurayiwa nebakatwa, nokuti vakanga vaita kuti munyika yevapenyu muve nokuvhunduka. 24 “‘Kuna Eramu+ neboka rose revanhu vake rakapoteredza guva rake, vose zvavo vakaurayiwa, vaya vaiurayiwa nebakatwa, vakaburukira kunyika iri pasi pasi vasina kudzingiswa, vaya vakaita kuti munyika yevapenyu muve nokuvhunduka; uye vachanyadziswa pamwe chete nevaya vanoburukira mugomba.+ 25 Vakamuisira mubhedha+ pakati pevakaurayiwa, pakati peboka rose revanhu vake. Makuva ake akaripoteredza. Vose zvavo havana kudzingiswa, vakaurayiwa nebakatwa,+ nokuti kuvhunduka kwavo kwakaitwa kuti kuvepo munyika yevapenyu; uye vachanyadziswa pamwe chete nevaya vanoburukira mugomba. Iye akaiswa pakati pevakaurayiwa. 26 “‘Ikoko ndiko kuna Mesheki+ naTubhari+ neboka rose revanhu vake. Makuva ake akamupoteredza. Vose zvavo havana kudzingiswa, vakabayiwa nebakatwa, nokuti vakaita kuti munyika yevapenyu muve nokuvhunduka. 27 Ivo havazorari pamwe chete nevane simba,+ vakaurayiwa pakati pevasina kudzingiswa, vakaburukira kuSheori pamwe chete nezvombo zvavo zvehondo here? Vachaisa mapakatwa avo pasi pemisoro yavo, uye kukanganisa kwavo kuchava pamapfupa avo,+ nokuti vane simba vaiva chinhu chinovhundutsa munyika yevapenyu.+ 28 Asi iwe uchaparara uri pakati pevasina kudzingiswa, uye ucharara pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa. 29 “‘Ikoko ndiko kune Edhomu,+ nemadzimambo ayo nemachinda ayo ose, avo, pavaiva nesimba, vakaiswa pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa;+ ivo vacharara pamwe chete nevasina kudzingiswa+ uye pamwe chete nevaya vanoburukira mugomba. 30 “‘Ikoko ndiko kune machinda okuchamhembe, ose zvawo, nevaSidhoni+ vose, vakaburuka pamwe chete nevakaurayiwa, vachityisa kwazvo nokuda kwesimba ravo, vachinyara. Vacharara pasi vasina kudzingiswa pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa uye vachanyadziswa pamwe chete nevaya vanoburukira mugomba.+ 31 “‘Ava ndivo vachaonekwa naFarao, uye achanyaradzwa pamusoro peboka rose revanhu vake.+ Farao neuto rake rose rehondo vachava vanhu vanourayiwa nebakatwa,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 32 “‘Nokuti akaita kuti munyika yevapenyu muve nokuvhunduka,+ uye acharariswa pakati pevasina kudzingiswa, pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa, iye Farao neboka rose revanhu vake,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”